wasmada siilka qalalan - iftineducation.com
wasmada siilka qalalan
iftineducation.com – Ugaar ah Dumarka Wasmada Jecel:7-daan Qalad Iska Ilaali Inta Lagu Guda jiro Kulanka Raaxada Ee Ninka Iyo Naagta…Inkastoo mujtamaceena Somaliya qaarkood ay ka xishoodaan ka hadalka arimaha la xariira nolosha lamaanaha ayaa hadana bahda arimaha qoyska ee xayaati.com waxa ay door bidayaan in aqristaayaasheeda ragga iyo dumarka isugu jira ka caawiyaan mowduucyo la xariira arimahaas .
Todobaadkaan waxaan ka hadleynaa qaladaad ay haboon tahay in laga fogaado inta lagu jiro xariirka sariirta ee lamaanayaasha is wasaya
Ninka Ma Aqrin Karo Waxa Laabtaada Ku Jira : waa wax xaqiiq ah in haweeneyda aysan ninkeeda toos ugala hadli karin arimo la xariira dhanka nolosha sariirta iyada oo ka cabsi qabta sida uu noqon karo fal celiskiisa balse xayaati.com waxa ay ku leedahay waa muhiim in ninka ku hagto waxa aad adiga ka hesho marka ciyaarta lagu jiro , adeegso maskax oo fahansii ninkaada waxa aad dooneyso marka waqtigaas macaan lagu jiro.
Iyadoo Kulanka Lagu Jiro Wax Haka Diidin : haddii aad daalan tahay ama xilligaas dooneyn ciyaarta ha diidan hana u cudur daaran iyadoo durba biloowga howsha lagu jiro ee ka hor inta asyan bilaaban u sheeg in ay kaa dhacsan tahay oo aadan ciyaarta safan karin .
Mararka Qaar Noqo Qofta Dhiirata : marka aad dareento in aad dareemeyso odayga waxa qasab kugu ah in tilmaan arintaas muujineysa siiso waa hubaal waa uu ku farxayaa waxa uuna dareemayaa in kaligiis aheyn qofka xiiseeya kulanka naxariista , haka yaabin in uu kaa diido balse taasi badalkeeda farxad ayuu ka qaadayaaa “.
@ Sheekada Inta Kulanka Lagu Jiro : waxaa qasab kugu ah gabaryaheey in aad ogaato nooca dabeecadda ninkaada iyo in uu jecel yahay in uu hadlo inta shirka laba geesoodka ah lagu jiro, waxaa jira rag aan jecleyn hadalka marka xaajada socoto.
+socoshada Shaqada Kuma Dhamaato Marka Ninka Xagiisa Ay Ka Dhamaato : waa qalad arintaas shaqda waxa ay ku dhaamaataa in labada dhinac wada qanacsan yihiin , waana muhiim in ninkaada kala hadasho dareemahaaga , tusaale haddii uu hortaada dhameysto adna dhameysan u sheeg in weli lagu gaarin si shaqada u sii socoto.
> Ha Diidin Hindisiyaashiisa : xariirka lamaane ee sariirta mar waliba cusbooneysiin ayuu u baahan yahay ayay shabakada xayaati ku leeday , haddii uu ku soo bandhigo hab cusub la wadaag haddii aysan aheyn mid diinta ka baxsan
KU DADDAAL NINYAHOW IN AAD DHANKAAGA KA DHEESHO CIYAARTA
SIDEEN KUSOO CESHAN KARAA HADDII GUSKA IGA JILCO OO XAASKA AAN QANCIN KARI WAAYE (DHANKA SARIIRTA)…???